Ungabona kanjani ukulandelana kwe-backlink ku-Google Analytics?
I-Google Analytics ingenye yamathuluzi wokuhlaziya aphezulu okuhlinzeka nge-webmasters yonke idatha edingekayo mayelana namamethriki we-website nesimo ku-SERP. Inikeza ithuba lokulandelela impumelelo yemikhankaso yokwenza injini yokusesha futhi sifinyelele iziphetho ezihambelana nolwazi olutholiwe. Enye inzuzo ecacile yale software ye-Google analytics yikhono lokulandelela i-backlinks kuwebhusayithi. Ku-GA izixhumanisi zangaphandle zibizwa ngokuthi ukuhanjiswa. Yingakho yilokho okudingayo ukubheka emibikweni yakho yokuhlaziywa.
Lesi sihloko sihlinzekwa ngolwazi lokubona emuva kwe-Google Analytics nendlela yokuhlukanisa ngayo ngekhwalithi nomthombo. Ngakho, lapha siya khona.
Izinyathelo zokubona nokuhlola emuva kwamanothi ku-Google Analytics imibiko
Khetha iphrofayili efanele ye-Google
Esigabeni sokuqala ukubambisana kwakho ne-GA, udinga ukuqinisekisa ukuthi usebenzisa i-akhawunti efanele, iphrofayli, nokubukwa njengoba ungase ube namaphrofayili amaningi lapha kanye nemiklamo eminingi ehlukene engabangela ukungcola kwangempela. Isayithi osebenza nabo manje lizofakwa esandleni sokunene sekhasi. Udinga ukuchofoza kuso bese ukhetha okufanele.
I-Backlinks ithrafikhi lapha ihlukaniswe idatha yokuthola. Izinyathelo ezilandelayo zizokusiza ukuthi uphendule umbiko wakho we-backlink ngokufanele:
Chofoza "Ukuzuza" kwimenyu yesokunxele ukuze uhlole yonke imibiko yokuthola;
Khetha ukuhlaselwa kwe "All Traffic";
Chofoza inkinobho ethi "Ukudlulisa".
Umbiko wokudluliselwa kuzokunika idatha ye-backlink
Imithombo yemigwaqo yokudluliswa ingatholakala kwisigaba se-Google Analytics esibizwa ngokuthi " Umbiko Wokudluliselwa. "Lapha uzobona yonke idatha edingekayo mayelana ne-backlink yakho nemithombo lapho bebeka khona.
Amasu asebenzayo wokuhlola i-backlink ku-GA
Kunamasu aphezulu wekhwalithi ongaphumelela ekufundeni imibiko yakho ye-backlink ku-GA.
Engeza izingxenye ezintsha zezilaleli
Ukuze unciphise ucwaningo lwakho futhi uthole ulwazi olunembile,. Le nqubo ye-Google Analytics izokusiza ukuthi ususe izinhlobo ezahlukene zezivakashi eziza kusayithi lakho nge-backlinks.
Ukuze uhlele izingxenyeni zakho zangemva, landela lezi zinyathelo:
Chofoza inkinobho ethi "Engeza Izigaba";
Sebenzisa ibhokisi lokusesha;
Bese uchofoza inkinobho ethi "Faka isicelo" ukuqinisekisa;
Emva kwalokho, uzothola iphesenti lesithameli esisha kanye nedatha efanisayo.
Ukuhlola imithombo yakho ye-backlink, ungasebenzisa "Ubukhulu bokuqala "Isebenza ku-GA. Ubukhulu bokuqala obuyisisekelo buwumthombo. Kuleli tibhu, ungabuka izizinda ezingemuva. Ukugcina ikhasi le-backlink, udinga nje ukuchofoza kwenye yezizinda. Ngokwenza kanjalo, uzokwazi ukubona indlela yokudluliselwa kwezixhumanisi zakho zangaphandle.
Ngemuva kokuhlola yonke imithombo yangemuva yangemuva, ungabheka nokuthi yimaphi amakhasi okuthola oyithola. Ungayenza, ulandela lezi zinyathelo:
Chofoza "Ikhasi Lokufika";
Wabe esebona amakhasi atholakala ngokulandelana;
Hlola idatha yakho yokuthola, ukuziphatha, nokuguqulwa; (ungabheka lezi zindlela ezihamba phambili ze-data) Source .